छोटो समयमा धेरैलाई संक्रमित बनाउने भेरियन्ट नेपालमा सक्रिय : डा. शेरबहादुर पुन छोटो समयमा धेरैलाई संक्रमित बनाउने भेरियन्ट नेपालमा सक्रिय : डा. शेरबहादुर पुन छोटो समयमा धेरैलाई संक्रमित बनाउने भेरियन्ट नेपालमा सक्रिय : डा. शेरबहादुर पुन Canada Nepal
छोटो समयमा धेरैलाई संक्रमित बनाउने भेरियन्ट नेपालमा सक्रिय : डा. शेरबहादुर पुन
डा. शेरबहादुर पुन जेठ ७ २०७८
भारतबाट नेपालमा आएको भेरियन्ट डबल म्युटेन्टको उत्परिवर्तित रुप हो । भारतमा फेला परेको प्रजातिबाट यसले आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरेको हो । चिकित्सकीय भाषामा यसलाई सब टाइप वा उपप्रजाति भनिन्छ । सामान्य भाषा भन्दा यसले डबल म्युटेसनबाट अलिकति फरक स्वरुप लिएको हो।
यो भाइरसको आमा अर्थात् मदर भाइरस भनेको बि. १.६१७ हो भने यसबाट उत्परिवर्तित रुप चाहिँ बी.१.६१७.१ र बी.१.६१७.२ हुन्। जसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार पुष्टि गरेको हो। यसलाई विश्व स्वास्थ्य संघठनले ’भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ मा वर्गीकरण गरेको छ। जसलाई सामान्य भाषामा भन्दा यसले वैश्विकरुपमा चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
यो भाइरस तिब्ररुपमा फैलिने र पहिलाको भन्दा पनि बढी संक्रामक छ। शरीरमा भएको एन्टीबडीलाई पनि चुनौती दिने खालको भाइरस हो। नेपालमा अहिले युके भेरियन्टसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार पुष्टि गरेको बी.१.६१७.१ र बी.१.६१७.२ भेरियन्ट गरेर तीनवटा भेरियन्ट भेटिएको छ।
यो भाइरस पहिलेको डबल म्युटेन्टभन्दा बढी संक्रामक रहेको र पहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत तिब्ररुपमा फैलिने खालको छ । संख्यात्मकरुपमा एक संक्रमितले एक सय जनालाई फैल्याउने भन्नेबारेमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर उदाहारणका लागि भारतलाई लिने हो भने, यहि प्रजातिको भाइरसले छोटो समयमा थुप्रै संक्रमित भएका छन्।
अहिलेसम्म नेपालमा यो भेरियन्टबाट कति जना संक्रमित भएका छन् भनेर अहिले ठ्याक्कै छुट्टयाउन सकिँदैन, किन भने अहिलेसम्म नेपालमा पीसीआरको रिपोर्टमा नेगेटिभ र पोजिटिभ मात्र देखिने भएकाले र भेरियन्ट छुट्टयाउन जिन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन नेपालमा अहिले उक्त प्रविधि प्रयोगमा छैन । भाइरसको भेरियन्ट पत्ता लगाउन समय समयमा भाइरसको जिनहरुको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ भेरियन्टमा खोपको प्रभावकारिता ?
अनुसन्धानबिना भन्न मिल्दैन, तर भेरियन्ट अफ कन्सर्न भएकाले विश्वमा उत्पादन भएका खोपको प्रभावकारीतालाई घटाउन सक्छ। त्यसैगरी, यदि भाइरस थप उत्परिवर्तित हुँदै गयो भने खोपलाई फेरि अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वैज्ञानिकहरु पनि खोपलाई अद्यावधिक गर्न तयार रहेका छन्। जसरी फ्लु वा इन्फ्लुएन्जाको खोप पनि हरेक सिजनमा परिवर्तन भएर आउँछ। खोपले कामै गर्दैन भन्ने होइन तर यदि खोप उत्परिवार्तित भयो भने खोपको प्रभावकारिता घट्दै जान्छ।
दोस्रो डोज समयमा लगाउन नपाउँदा कस्तो असर पर्छ ?
पहिलो खोपको डोज लगाइसकेकाले भरसक समय मै दोस्रो डोज लगाउन उपयुक्त हुन्छ। यदि समयमै लगाउन पाइएन भने यसले असर खास्सै नदेखिए पनि खोपबाट जति फाइदा पाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको प्रतिशतमा भने गिरावट आउन सक्छ।
तेस्रो लहर कहिले र निशानामा को ?
नेपालमा अहिले कोरोनाभाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । यही बेला तेस्रो लहरको सम्भावना र सम्भावित असरबारे आंकलन गर्न थालिएको छ । तर, तेस्रो लहर कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । बालबालिका मात्रै नभएर त्यसले अवश्य पनि सबै उमेर समूहलाई असर गर्न सक्छ।
तर, खोप लगाउन नपाएको हुँदा बालबालिकालाई निशाना बनाउने जस्ता धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बालबालिका खोपको ट्रायल भइरहेको छ र नतिजाहरु पनि आउँन बाँकी भएका पनि यस्तो प्रेडिक्सन गरिएको होला।
यो भेरियन्टले अहिले खोप नलगाएकाहरुलाई भने आफ्नो चपेटामा लिइरहेको छ। यो पटक युवास्थामा संक्रमण बढी देखिएको र तेस्रो लहरमा बालबालिकासहित खोपबाट बन्चित भएकालाई संक्रमण बढी हुने केहीले अनुमान गरेका होलान्।
भाइरसको स्थिर अवस्था
एक हप्ता अघि देखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थिति अहिले स्थिर छ । र निषेधाज्ञा हुनु अघिको नतिजा देखिरहेको छ। यतिबेला, मानिसहरु घर भरमा छन्, एक परिवारले अर्को परिवारको सदस्यलाई भेट्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा राता रात बढ्छ भन्ने होइन बरु अब यो क्रम बिस्तारै अब केही दिन वा हप्तामा घट्दै जान्छ जस्तो लाग्छ। उनले अहिले टेकु अस्पतालमा पनि पहिलेको हप्ता भन्दा चाप थोरै घटेको छ ।
जेठ ७, २०७८ शुक्रवार ०९:४१:४१ बजे : प्रकाशित
# छोटो समय
# नेपालमा आएको भेरियन्ट